Fanombohana ny tetikasa tantara an-tsary voalohany ho an’ny firenena Afrikana miteny Portiogey · Global Voices teny Malagasy
Mikatsaka ny hampiroborobo ny tantara an-tsary any Mozambika, Angola ary Cap Vert.
Voadika ny 12 Mey 2022 4:33 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, Português
Fifaninanana tantara an-tsary, Sary nahazoana alalana avy amin'ny tranokalan'ny fikambanana.
Hatramin'ny 8 Aprily 2022, natomboky ny firenena Afrikana miteny Portiogey ny hetsika mikendry hampiroborobo ny fahaiza-mamoron'ny mpanao tantara an-tsary any Mozambika, Angola ary Cap Vert. Antsoina hoe BDALOP ity fanentanana ity ary mikatsaka ny hanome fahafahana ho an’ireo mpamorona tantara an-tsary hanatanterahany ny asany amin'ny fomba maharitra, ahitana antoka hidirana amin'ny tsena iraisampirenena.
Tany Maputo, Mozambika no nambara ny fanentanana ary hamela ireo mpanakanto hanana soa fanararaotra bebe kokoa avy amin’ity fandaharan'asa ity ary hahazo fandrisihana amin'ny fomakarana ara-javakanto. Ahitana tsenam-boky any Brezila sy Portiogaly ihany koa ny hetsika, ary kinendry ny handraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny kolontsaina sy ampiasaina hanatsarana ny tantara an-tsary.
Fantatra fa anisan’ny hasongadina amin’ity hetsika ity ny fanomezana vatsy isan-taona ho an’ny famoronana tantara an-tsary hataon’ireo mpanao sary sy mpanoratra tantara ho an'ny 18 taona no mihoatra.
Haharitra eo anelanelan'ny taona 2022 sy 2024 ny BDPALOP, ary teraka avy amin’ny filàna fanamaroana ny fampivoarana ny sehatry ny kolontsaina sy ny famoronana any amin'ireo firenena idirany an-tsehatra sy hananganana asa ara-dalàna kokoa amin'ny alàlan'ny famoahana boky tantara an-tsary. Tanjona ihany koa ny handrisika ankizy sy tanora maro kokoa avy amin'ny firenena Afrikana mampiasa ny teny Portiogey ofisialy mba hanombohan'izy ireo hamaky izany, izay hikatsahana ny fampiroboroboana ny fahaiza-mamaky teny sy manoratra.
Any amin'ny famaranana, asa famoronan-tantara mivady amin'ny fandravahana miisa sivy no hahazo ny fanohanan'ny matihanina eo amin'ny sehatra. Marihina fa ity hetsika ity dia mampiroborobo ny politikan’ny miralenta amin’ny hetsika rehetra ataony, ka miantoka fa hahazo anjara 50% amin'izany ny vehivavy. Tsidiho ny vavahadin'ny tetikasa raha hisoratra anarana.